चिया पिलाउँदै, स्वाद चिनाउँदै पानीटारका राजु - नेपालबहस
चिया पिलाउँदै, स्वाद चिनाउँदै पानीटारका राजु
| १३:११:५९ मा प्रकाशित
२ फागुन,इलाम । उद्योग आसपास जब नयाँ मान्छे पुग्छ, उद्योगी छेउमा पुग्छन् । चिनजान गर्छन् । खबर सोधासोध हुन्छ । सँगै घुमघाम गर्छन् । अनि उद्योगीले आफ्नै उद्योगमा पाहुनालाई आमन्त्रण गर्छन् ।
उद्योगको आफ्नै ‘क्याबिन’मा बसाउँछन् । अनि सोध्छन्,‘कुन चिया लिउ रु’ पाहुनाको जवाफअनुसार चिया बनाइन्छ । कसैले छनोट गर्न नसके पनि मिठै चिया पिलाउँछन् । आफ्नो क्षेत्रमा आउने पाहुनालाई गर्ने सत्कार हो यो । अनि चियाको प्रर्वद्धन । यसरी थरिथरीका चिया पिलाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ इलाम देउमाई नगरपालिकास्थित पानीटारका राजु कटुवाल । कटुवाल पानीटार नजिकैको ब्रदर्श अर्थोडक्स टी प्रोडर्सस प्रालिका सञ्चालक हुन् ।
पानीटार आसपासका किसानको चिया ल्याउने फ्याक्ट्री हो, ब्रदर्श अर्थोडक्स । नाम जस्तै मान्छे पनि । दाजुभाइ झैँ सबैलाई सत्कार गर्ने उनको बानी । यसैले एकादुई दिनमा उनका पाहुना आइरहन्छन् । यी सबैलाई आफ्नै हातले बनाएको चिया पिलाएर उनी पठाउछन् । यहाँ व्यापारसँगै सत्कार र संस्कृति तथा संस्कार झल्किन्छ । राजु सञ्चालक बनेदेखि यो उद्योग निरन्तर चलिरहेकै छ । उनको यही व्यवहारले नेपाल मात्र होइन, भारतहुँदै तेस्रो मुलुकसम्म चियाको व्यापार पुगेको छ ।
कसैले उद्योगको तपाई के हो भनेर सोधे, राजु ठट्यौलीमा भन्छन्,“खोइ आफैलाई थाहा छैन, सबै थोक आफै गर्नुपर्छ ।” उद्योगको सबैथोक आफै गर्नुपर्नाले राजुलाई व्यवस्थापक भने नि हुन्छ । विसं २०६८ तिर राजु त्यही उद्योगको हरियो चियापत्ती सङ्कलक थिए । यसपछि एक्कासि उद्योगी बन्नुपर्ने भयो । अनेक समस्या र अभावकाबीच राजु सञ्चालक बने ।
राजुकै हातबाट ११ किसिमको ‘भेराइटिज’का ‘ग्रीन टी’, ‘नर्मल ग्रीन टी’, ‘रोस्टेड ग्रीन’,‘नर्मल ग्रीन’, ‘पल ग्रीन’,‘गोल्डेन पल’,‘ह्वाइट पल’,‘गोल्डेन टी’,‘ह्वाइट टी’,‘ह्वाइट हिँडन’,‘गोल्डेन निडल’,‘ब्लाक टी’ र ओलाङ टी बन्छन् । अरू चियामा भन्दा बेग्लै स्वाद हुन्छ, अर्थोडक्समा । अनि झन् बेग्लै पहिचान र स्वाद हुन्छ, अर्गानिक अर्थोडक्समा । त्यसमा पनि पानीटारको अर्थोडक्समा भिन्नै स्वाद भेटिन्छ । हावापानी र भौगोलिकता नै भिन्न भएकाले चियामा विशेष स्वाद हुन्छ । यो चिनाउन राजु अहिले ‘टी टुरिज्जम’मा लागेका छन् ।
पानीटारकै एउटा कुनै ठाउँमा बस्ने, चियाकै पुस्तक पाहुनालाई देखाउने, चिया चखाउने र अनि चिया चिनाउने योजना बोकेर उनी हिँड्दै जान्छन् । चियाले आफ्नै ठाउँमा बजार लिनुपर्छ भन्ने मान्यता उनी राख्छन् । केही दिनअघि मात्र सरकारले देशभरका १०० पर्यटकीय क्षेत्र छनोटमा पानीटार राखेको छ ।
देउमाई नगरपालिकाको पानीटार पर्यटन विकास तथा सिद्धिथुम्कामा टावरसहित पार्क निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । सो आयोजनाका लागि रु एक करोड ४४ लाखको लागत अनुमान गरिएको छ । सोका लागि मन्त्रालयको लागत रु ९४ लाख र साझेदार लागत रु ५० लाख रहेको छ ।
पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित अर्थोडक्स चिया विश्वभर उच्च गुणस्तरीय १ महिना पहिले
ग्यास्ट्रिकका बिरामीको लागि चिया र कफी कत्तिको हानिकारक छ ? ३ महिना पहिले
कोरोनाले विश्व बजारमा सङ्कट, चियामा एकपछि अर्को उपलब्धि ३ महिना पहिले
भारत र अमेरिकामा नेपाली चियाको लोगो दर्ता ३ महिना पहिले
विद्यालयमा ‘रेष्ट रुम’ स्थापना, छात्रा चार दिने तनावबाट छुटकारा ! २ मिनेट पहिले
महिलाको सशक्तीकरण, रोजगारी र शिक्षामा मुख्यमन्त्री राउतको जोड ४ मिनेट पहिले
हजारौँ महिला समान कामको समान ज्याला पाउनबाट वञ्चित ९ मिनेट पहिले
महिलाको अधिकार स्थापित गर्न आवाज बुलन्द पार्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड ९ मिनेट पहिले
कामना सेवाको ऋणपत्र रजिष्टारमा एनआइबिएल एस क्यापिटल नियुक्त १३ मिनेट पहिले
लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेद हट्नुपर्छः मुख्यमन्त्री शाही ३० मिनेट पहिले
दाहाल–नेपाल समूहले बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक सर्‍यो ३३ मिनेट पहिले
मुल्य बृद्धिसंगै बजारमा कागजको अभाव, ब्यवसायी मर्कामा ३५ मिनेट पहिले
सर्वसाधारणको हितलाई लक्षित गर्दै रुपामा सप्ताहव्यापी शिविर ४३ मिनेट पहिले
बागलुङ–पर्वतः झोलुङ्गे पुलले जोडिएको बहुआयामिक सम्बन्ध, सात वर्षमा बने १८ नयाँ पुल ५४ मिनेट पहिले
आँधीखोलामा दलित संघको कार्यक्रम सम्पन्न २२ घण्टा पहिले
प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने ट्रक चालक पक्राउ २४ घण्टा पहिले
सोमबारदेखि भारतको बजेट अधिवेशन सुरु हुने २१ घण्टा पहिले
साताको पहिलो दिन सुनको मूल्य बढ्यो २४ घण्टा पहिले
बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ ५ दिन पहिले
प्रचण्ड-नेपालले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने ५ दिन पहिले
‘देश आन्दोलित र अस्थिर बन्दैछ’– लोहनी २ हप्ता पहिले
विप्लव समूह सरकारसँग वार्ता गर्न तयार २ हप्ता पहिले
दीपिकासँग मुम्बइका रोहितले रोमान्स गर्ने ४ हप्ता पहिले
युरोडिस फोटो अवार्डमा लामिछानेले खिचेको फोटो ३ हप्ता पहिले
संशय पैदा भएको विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ : राप्रपा १ वर्ष पहिले
ओलीको सुरक्षा थ्रेटः– सेण्टिमेन्ट बटुल्ने मेलो कि ठूलै विध्वंस मच्चाउने संकेत ? ५ दिन पहिले
कुस्ती खेलाडी प्रशिक्षणमा २ महिना पहिले